MR MRT: တရားမင်းသခင် - ၅၇။ မေတ္တာစွမ်းရည်
တရားမင်းသခင် - ၅၇။ မေတ္တာစွမ်းရည်
ရာဇဂြိုဟ်သို့ ကြွတော်မူလိုကြောင်း ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူသောအခါ ရှင်အာနန္ဒာသည် စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်သွားပြီး ဘုရားရှင်ကို မ၀ံ့မရဲ လျှောက်ထား၏။
“ဒီ ဇမ္ဗူဒိပ်ကျန်းမှာ ကြွစရာ နေရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် မြတ်စွာဘုရား။ သာဝတ္ထိကို ကြွတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဝေသာလီကို ကြွတာက ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ် မြတ်စွာဘုရား။”
“အာနန္ဒာ . . . ဘာဖြစ်လို့လဲ။”
“မြို့တော်သာဝတ္ထိဟာ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝပါတယ် ဘုရား။ မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုတဲ့ ဒကာဒကာမ မြောက်များစွာလည်း သာဝတ္ထိမှာ ရှိနေပါတယ် ဘုရား။”
“အာနန္ဒာ . . . လောကမှာ သူတော်ကောင်းတွေချည်းပဲ ရှိတယ်ဆိုရင် ဘုရားပွင့်စရာ မလဲိုတော့ဘူး။ အာနန္ဒာ . . . မယဉ်ကျေးသူတွေ၊ စည်းကမ်းမဲ့သူတွေ ရှိတဲ့နေရာကို ငါ သွားရမယ်။ ဒေ၀ဒတ် ရဟန်းနဲ့ အဇာတသတ် မင်းတို့က ပြဿနာ ရှာကြလိမ့်မယ်လို့ အာနန္ဒာက ယုံကြည်ယူဆထားတော့ ရာဇဂြိုဟ်သွားဖို့ တွန့်ဆုပ်နေတာပေါ့။ အာနန္ဒာ နေခဲ့ပါ။ ငါတစ်ပါးတည်းပဲ ရာဇဂြိုဟ် သွားမယ်။ မင်း မိဖုရားတွေ ငါ့ကို မနှစ်သက်ဘူး ဆိုရင်လည်း ငါ ရင်ဆိုင်မယ်။ ပြည်သူတွေက ငါ့ကို မကျေနပ်ကြဘူး၊ မကြည်ညိုကြဘူး ဆိုရင်လည်း ငါ ရင်ဆိုင်မယ်။”
“မြတ်စွာဘုရား . . . တပည့်တော် . . . အရှင်ဘုရားရဲ့ အရိပ်တစ်ခုလို အရှင်ဘုရားနောက်က လိုက်မှာပါ ဘုရား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် . . . ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း စိတ်ဆင်းရဲခြင်း . . . ဆင်းရဲခြင်းမှန်သမျှကို တပည့်တော် ခံယူနိုင်ပါတယ် ဘုရား။ ဒါပေမယ့် . . . မြတ်စွာဘုရား . . . ပြဿနာနောက် လိုက်နေမိတာ . . . ပူဆွေးသောကကို ဖိတ်ခေါ်မိတာမျိုး ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ ဘုရား။ ဒေ၀ဒတ် ရဟန်းက ရာဇဂြိုဟ်မှာ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘ ကြွယ်ဝနေပြီး သြဇာအာဏာ အရှိန်အ၀ါလည်း ကြီးမားနေပါတယ် ဘုရား။ အဇာတသတ် မင်းသားကလည်း သူ့ကိုပဲ ကြည်ညိုထောက်ပံ့ နေတာပါ ဘုရား။ ဗိမ္ဗိသာရ မင်းကြီးကတော့ . . . သူတော်ကောင်းကြီးပေမယ့် . . . အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်နေပါပြီ ဘုရား။ မင်းအာဏာ မှန်သမျှ အဇာတသတ်မင်းသားရဲ့ လက်ခုပ်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ် ဘုရား။ မြတ်စွာဘုရား . . . တပည့်တော် စိုးရိမ်တာ . . . တပည့်တော်အတွက် မဟုတ်ပါ ဘုရား။ အရှင်ဘုရားအတွက် စိုးရိမ်တာပါ ဘုရား။”
“အာနန္ဒာ . . . ငါ့ကို ဆန့်ကျင်မယ့် နေရာ၊ ငါ့ကို စော်ကားမယ့် နေရာ၊ ငါ့အပေါ် မတော်မတရား ပြုမယ့်နေရာဟာ ငါ သာသနာပြုရမယ့် နေရာပဲ။ အဲဒီလို နေရာမှာ မကောင်းမှု အညစ်အကြေး ရှိနေတယ်။ ငါ သုတ်သင်ပေးရမယ်။
သာဝတ္ထိမှာ အနာထပိဏ် သူဌေးက ငါ့ကို ခမ်းခမ်းနားနား ကြိုဆိုခဲ့တယ်။ လူပရိသတ် အလုံးအရင်းနဲ့ စီတန်းပြီး ကြိုဆိုကြတယ်။ အလံတွေ တလူလူ၊ ထီးဖြူတွေ တ၀င့်ဝင့်နဲ့ ကြိုဆိုကြတယ်။ မြို့သူမြို့သားတွေ အလွန်အမင်း ကျေနပ်ပျော်ရွှင် ကြရတယ်။ သူတို့ ခံစားလိုက်ကြရတဲ့ အဲဒီလို ပီတိမျိုးကို ဘုရားရှင်တို့သာ လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်။ အဲဒါပဲ . . .။ အဲဒီ ပီတိလောက်ပဲ . . .။ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲနှလုံးထဲထိ လေးနက်တဲ့ တရားဓမ္မ မရောက်ခဲ့ဘူး။ ငါ ဘယ်သူဆိုတာ သူတို့ လေးလေးနက်နက် မသိခဲ့ကြဘူး။
ကောသမ္ဗီမှာတုန်းကတော့ ငွေမက်တဲ့ ကြေးစားလူငယ်တွေက ငါ့ကို ဟစ်အော်လှောင်ပြောင် သရော်ပြီး ကျူးလွန်စော်ကားကြတယ်။ ငါ့ကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ကြိုဆိုကြတယ်။ ဒါပေမယ့် . . . လူတွေ သောင်းနဲ့ချီပြီး လိမ္မာသွားကြတယ်။ ကောသမ္ဗီမှာ . . . မာဂဏ္ဍီကလွဲလို့ . . . အကုန်လုံးက ငါ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသွားကြတယ်။
အခု နောက်ဆုံး . . . သာဝတ္ထိမှာ ငါ့ရဲ့ တပည့်သား သံဃာတွေ ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်ကြတာဟာလည်း တိတ္ထိတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်မှုကြောင့်ပဲ။ ငါ့ရဲ့ တရားဓမ္မဟာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခြင်းရဲ့ စမ်းသပ်မှုကို ခံနိုင်ရည် ရှိတယ်။”
ဘုရားရှင်က ထိုသို့ မိန့်တော်မူသော်လည်း ရဟန်းတော် အများစုက ဘုရားရှင်နှင့် အတူ ရာဇဂြိုလ်သို့ မလိုက်ကြပေ။ ရှင်အာနန္ဒာနှင့် အနည်းငယ်သော ရဟန်းတော်တို့သာ လိုက်ပါကြ၏။ ထိုအချိန်၌ အဂ္ဂသာဝကများ ဖြစ်ကြသည့် ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်မောဂ္ဂလာန်တို့လည်း ၎င်းတို့၏ ဇာတိရွာသို့ အသီးသီး ပြန်ကြွနေကြ၏။ ကောသမ္ဗီမှ ရာဇဂြိုဟ်သို့ ဘုရားရှင် ဒေသစာရီ ကြွချီတော် မူနေစဉ် အဇာတသတ် မင်းသားသည် ထီးနန်းစည်းစိမ်းကို ဖခင်ထံမှ အရယူလိုက်၏။
ဗိမ္ဗိသာရ မင်းကြီးသည် သားအပေါ် ထားရှိသည့် မေတ္တာဖြင့် တိုင်းပြည်ကို သားထံသို့ အလွယ်တကူ ပေးအပ်လိုက်၏။ ဒေ၀ဒတ်ရဟန်း၏ သြဇာခံ အဇာတသတ်မင်းသည် ဒေ၀ဒတ်ရဟန်း အကြံပေးသည့်အတိုင်း ဖခင်ကို သတ်ရန် အားထုတ်၏။ ဘုရားရှင် ရာဇဂြိုဟ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူသောအခါ နန်းကျဘုရင် ဗိမ္ဗိသာရကို အဇာတသတ်မင်းက ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားပြီ ဖြစ်၏။ ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီး လှူဒါန်းခဲ့သော ဝေဠုဝန်ကျောင်း နံရံတို့၌ ဆဲရေးတိုင်းထွားသည့် ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း စာတမ်းများ မီးသွေးနှင့် ရေးထား၏။ မဖွယ်မရာ ပုံများလည်း မြင်မကောင်း ရှုမကောင်း ရေးဆွဲထားလေ၏။ အဇာသတ်မင်းသည် ဒေ၀ဒတ်ရဟန်းဘက် သိသိသာသာကြီး ပါနေပြီဟု သိထားကြသော မြို့သူမြို့သားတို့သည် ဝေဠုဝန် ကျောင်းတော်သို့ သွားရောက်ရန် မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေကြ၏။ ဘုရားရှင်ထံ လာရောက်၍ တရားနာသူ တစ်ယောက်မှ မရှိပေ။
ရာဇဂြိုဟ်သို့ ရောက်ရှိနေကြသော ကုန်သည်ညီနောင် နှစ်ယောက်တို့သည် ဝေဠုဝန် ကျောင်းတော်ဘက် ရောက်ရှိလာကြပြီး ကျောင်းဝင်းအတွင်း ညောင်ပင်ရိပ်၌ သီတင်းသုံး နားနေတော်မူသည့် ဘုရားရှင်ကို မြင်လျှင်မြင်ချင်း ဘုရားရှင်ထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ သာမာဝတီ မိဖုရားနှင့် ရံရွေတော် ငါးရာတို့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခံလိုက်ရသည့် ၀မ်းနည်းဖွယ် အဖြစ်ဆိုးကို ဘုရားရှင်အား ပြောကြားလျှောက်ထားကြ၏။
“အရှင်ဘုရား . . . မကြာခင်ကပဲ သာမာဝတီ မိဖုရားနဲ့ ရံရွေတော် ငါးရာတို့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရပါတယ် ဘုရား။ မာဂဏ္ဍီ မိဖုရားနဲ့ အပေါင်းအပါတွေရဲ့ လက်ချက်ပါဘုရား။ တစ်ခါ . . . ဥဒေန မင်းကြီး မျက်မာန်တော် ထွက်ရှပြီး လုပ်ကြံမှုကြီးမှာ ပါဝင်သူတွေ အားလုံးကို ကွပ်မျက်လိုက်ပါတယ် ဘုရား။ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှုကြီး နှစ်ခုဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့ ကောသမ္ဗီ တစ်မြို့လုံး တုန်လှုပ်ချောက်ချား နေပါတယ်ဘုရား။ ပူးဆွေးသောက ရောက်နေကြပါတယ် ဘုရား။”
“ဒကာတော် . . . အမုန်းရန်ငြိုးရဲ့ ဆိုးရွားပုံ သဘာဝကို မြင်အောင် ကြည့်စမ်းပါ။ မာဂဏ္ဍီဟာ သူ့ကိုယ်သူ ကမ္ဘာမှာ အလှဆုံးထင်ပြီး မောက်မာဝင့်ကြွားနေတယ်။ ကုရုတိုင်းမှာ ငါ့ကိုတွေ့တော့ သူ့အလှနဲ့ ငါ့ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ငါနဲ့အတူ ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ မျှော်လင့်ရှာတယ်။ သူ့အကြံ မအောင်မြင်တော့ ငါ့အပေါ် ရန်ငြိုးဖွဲ့တယ်။ ငါ ကောသမ္ဗီရောက်တဲ့ အခါမှာ သူက ကောသမ္ဗီဘုရင် ဥဒေနရဲ့ မိဖုရားခေါင်ကြီး ဖြစ်နေပြီ။ သူ့ရဲ့ ရာထူးဂုဏ်သိန် စည်းစိမ်တွေကို ငါသိအောင် ကြွားချင်တယ်။ အဲဒီ အကြံလည်း မအောင်မြင်ဘူး။ ဒီတော့ ငါ့ကို ပိုပြီးတော့ နားကြည်းမုန်းတီးသွားတယ်။ အမုန်းတရားမှာ နယ်နိမိတ် အကန့်အသတ် မရှိဘူး . . . ဒကာတို့။ မာဂဏ္ဍီဟာ ငါ့ကို မုန်းတီးရုံတင် မကဘဲ ငါ့ကို ကြည်ညိုလေးစားကြတဲ့ ဒကာဒကာတွေကိုပါ ရန်ငြိုးပွားလာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သာမာဝတီ မိဖုရားနဲ့ အတူ အပြစ်မရှိတဲ့ ရံရွေတော် ငါးရားကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိုက်တယ်။ သူလည်း အဲဒီပြစ်မှုကြောင့် သေဒဏ်ပေးခံလိုက်ရတာပဲ။ သူ့ကြောင့် သူ့ရဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေလည်း သေဘေးဆိုး ကြုံခဲ့ရတယ်။ ကံတူ အကျိုးပေး ခံစားလိုက်ကြရတယ်။ ငါ့ရဲ့ သစ္စာတရားကို သိမြင်ကြတဲ့ သူ့မိဘတွေကလွဲလို့ တစ်ဆွေလုံး တစ်မျိုးလုံး သေကိန်းဆိုက်ခဲ့ကြရတယ်။ ရန်ငြိုးဒေါသ မျက်မာန်ရှခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးပါပဲ . . . ဒကာတို့။
ဒကာတို့ . . . အမုန်းတရားကို အမုန်းတရားနဲ့ မအောင်နိုင်ဘူး။ အမုန်းတရားကို မေတ္တာနဲ့ပဲ အနိုင်ယူနိုင်တယ်။ ၀န်ဆောင်နွားရဲ့ နောက်ကနေ ၀န်တင်လှည်းဘီး လိုက်နေသလို အမုန်းတရားရဲ့ နောက်ကနေ အကုသိုလ်တွေ လိုက်ပါတယ်။ မကောင်းကျိုးတွေ လိုက်ပါတယ်။ မပြေနိုင်တဲ့ အမုန်းရန်ငြိုး အဆက်ဆက်ကြောင့် သံသရာလောကသားတွေဟာ ဘ၀အဆက်ဆက် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ ဘ၀တစ်ခုရဲ့ နှစ်နှစ်သုံးနှစ် အတွင်းမှာပဲ . . . ကာမစ္ဆန္ဒကို အခြေတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ အမုန်းရန်ငြိုးကြောင့် ဆုံးရှုံးပျက်စီးရတာကိုပဲ ကြည့်ပါဦး . . . ဒကာတို့။”
“မြတ်စွာဘုရား . . . နန်းဆောင် တစ်ခုလုံး ပြာကျအောင် မီးရှို့ခံလိုက်ရတော့ သာမာဝတီ မိဖုရားနဲ့ ရံရွှေတော်တွေ အသက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ် ဘုရား။ အလောင်းတွေ ကြားထဲမှာ သာမာဝတီ မိဖုရားရဲ့ အလောင်းကို ကောင်းကောင်းကြီး မှတ်မိကြပါတယ်တဲ့ ဘုရား . . .။ သာမာဝတီ မိဖုရားဟာ မီးလောင်တိုက် အသွင်းခံရတဲ့ ကြားထဲမှာပဲ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား အားထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဘုရား။ ထိုင်လျက်သား ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်နေတဲ့ မိဖုရားရဲ့ မဲမဲကြုတ်ကြုတ် ရုပ်အလောင်းကို မီးလောင်ပြင်မှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်တဲ့ ဘုရား။”
“ဒကာတို့ . . . သာမာဝတီဟာ ဗြဟ္မ၀ိဟာရ မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကို ဈာန်ဆိုက်ြအောင်အထိ စိုက်စိုက်စူးစူး မြဲမြဲမြံမြံ ရှုအားသန်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီလို . . . သေဘေးဆိုးကို အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပဲ။ သာမာဝတီဟာ အရိယာ သူတော်စင်လည်း ဖြစ်တယ်။ တရားရှင်မို့ သေခြင်းတရားကို သက်တောင့်သက်သာ ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒကာတို့ . . . လောဘကြောင့် မှားခြင်းဆိုတဲ့ ဆန္ဒာဂတိ၊ အမုန်းဒေါသကြောင့် မှားခြင်းဆိုတဲ့ ဒေါသာဂတိ၊ မသိလို့ မှားခြင်းဆိုတဲ့ မောဟာဂတိ၊ ကြောက်လို့မှာခြင်းဆိုတဲ့ ဘယာဂတိ . . . ဒီ အဂတိ လေးပါးကို လူသားတွေ သိနားလည်ကြမယ်၊ အဂတိလိုက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သိကြမယ်ဆိုရင် ဒီကမ္ဘာဟာ အချင်းချင်း ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ခြင်း အငြင်းအခုံ အရှုပ်အထွေး ပဋိပက္ခတွေ ကင်းကင်းနဲ့ နေစရာကောင်းတဲ့ အငြိမ်းကမ္ဘာကြီး ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အမုန်းတရားဟာ ကမ္ဘာကို လောင်မြှိုက်တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကတော့ ကမ္ဘာကို ငြိမ်းချမ်းအေးမြစေတယ်။ လူသားတွေကို ငါ သွန်သင်ပေးတဲ့ ပထမဆုံးသော ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲ။”
Posted by Ashin Acara. at 2:20 AM